Owathi ukuthi indoda kufanele ukugunda izinwele ngempela emfushane? Ngokungangabazeki, ezincane ubude izinwele, kuba lula ekuzeluseni. Kodwa uma ufuna ezidonsela ukunakekela umuntu wakhe, ikakhulukazi abesifazane, kubalulekile ukuzama kancane ukushintsha isithombe nesithukuthezi. Zama ukhule izinwele kancane. Futhi lapha asikhulumi mayelana emigqeni kuye ozwaneni. Ubude Abaningana impela kahle ukuba uzicabangele izinto ongakhetha izinwele naphakathi zezinwele.
A stylist abanekhono uzokwazi ukukhetha isitayela esazo zonke umuntu uvumelane yokuphila futhi izintandokazi zakho ukwenza izingubo zokugqoka. A ukugunda izinwele yimpumelelo ulungisa amaphutha ecasulayo ukubukeka. Master sizobonisa ukuthi kungenzeka kanjani ukuba abeke imicu, ekhaleni kwakubonakala emifushane (eside), amehlo aphumele ngaphandle izindlebe, izihlathi ohlabayo. Bunake lezi amathiphu. Umgomo wakho - ukuze ube stylish and angenakuvinjwa umakhonya, futhi ngenxa yalokho, ungafunda indlela yokusebenzisa kanye hairdryer, futhi ijeli mousse akusho ubuhlungu ukuthenga.
Zabesilisa zezinwele izinwele naphakathi zihlukene. Izakhi besitayela okuxubile, ingasebenza modified, ngakho zezinwele ezibonakala ezifanayo sehluke njalo.
Fans of izinhlanga zokusetshenziswa banganezela ukubukeka kwakho ekhululekile kanzima okhulayo izinwele kancane ekhanda lakhe. Umqhele kungenziwa usike emifushane, kodwa izinwele ezinhlangothini ukufinyelela nehlo. Ngokuhlanganyela sokuvalelisa phakathi, lokhu "cap" uyokunika uhlobo umthandi adventure kanye umnqobi izinhliziyo zesifazane.
Curls abanikazi ajabulayo asondele zezinwele zabanye. Kokuphakathi izinwele esiphezulu obuphelele ishiywa phezulu (mayelana 10 amasentimitha), izinhlangothi ukuyoguqulela esimfushane (kodwa kancane!). Kancane eshukumisa nezinxushunxushu ekhanda, engeza umphumela imfashini imicu wokushiswa (Umbala kungcono ukwenza at stylist), futhi usemncane, nehlolamvula khulula.
Une izinwele elincanyana? Round ubuso, okuyinto obonakala kuwe elula abanomqondo ovulekile, hhayi ukuthi zonke lezi osaziwayo ekhaveni? kwekhanda Waphothula izinwele naphakathi kuyothuthuka isimo semizwa yakho. Imicu bafa "izingqimba", ubude bayo emuva izinhlangothi kuyahlukahluka. izinwele Izacile etholwe isamba esengeziwe ngenxa ethile locezu indlela. UMFANEKISO kancane side zibukeke yinde kwekhanda round ubuso.
Uma ungeyena ukulungele ushintsho olungcono, bese uqala ukusebenzisa bang. zezinwele azilingani abesilisa ngakho kuhle izinwele naphakathi ukuthi iningi izinwele azifinyezwanga. esiphongweni Ubude cheekbones. Kumele ayesebenza nganxanye. Futhi nangu kwesokunene noma kwesobunxele - ingabe ukuxoxa nge yenkosi yakho. It weluleka ukhetho kuyoba ukubukeka ezisizayo.
Akhonza bephoqeleka esikhathini esiningi egqoke amasudi ibhizinisi esiqinile, banamathele zabuna efakazelwe. Savuka kwekhanda kwamashumi amahlanu, okuyinto sekuwumkhuba kakhulu kwekhulu lamashumi amabili nanye, kahle kakhulu isitayela ongaphakeme-key. Kumelwe sithathe indlela ubeka noma usebenzisa konke izinwele slicked emuva, ebanikeza ukuphambuka kancane ohlangothini.
Ukukhetha ngokwakho zezinwele angamaduna izinwele naphakathi, sicela ukutayela imikhiqizo. Mousses, si, waxes ukugunda izinwele okwenyanga futhi uyigcine kusukela sezulu. Ngemva ukugeza ngempela ezomile imicu hairdryer. Ukunikeza ivolumu lift izinwele ibhulashi. Cela yenkosi yakho ukukufundisa Indlela lelula emakhiyubhi, futhi ekuseni ngeke sibhekane ngokuphumelelayo izinwele zabo ngokushesha okungaka.
I-prostate ... I-massage ye-prostate: inzuzo